स्वास्थ्य पेजकुन समयको यौन सम्पर्कले बढी सन्तुष्टी दिन्छ ? - स्वास्थ्य पेज कुन समयको यौन सम्पर्कले बढी सन्तुष्टी दिन्छ ? - स्वास्थ्य पेज
कुन समयको यौन सम्पर्कले बढी सन्तुष्टी दिन्छ ?
शारीरिक सम्बन्धमा सन्तुष्टिबारे मानिसका आ–आफ्नो भोगाई र सोचाई हुने गर्छन् । यसमा समय, अवस्था सबैकुराले असर गर्ने गर्छ । घरको वातावरण, जोडीको मुड जस्ता विषय पनि यौन सन्तुष्टि मापनका कारक बन्न सक्छन्।
शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने सबैले सन्तुष्टि पाएका हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । हतार, भय, प्रतिकुलता, खराब मुड भएको अवस्थामा राखिएको यौन सम्बन्धले सन्तुष्टि दिँदैन। तर, शारीरिक सम्बन्धबाट दम्पतीहरु तृप्त हुन चाहन्छन् ।
कतिपय अवस्थाको शारीरिक सम्बन्धले राम्रा नतिजा नदिन पनि सक्छ। शारीरिक सम्बन्धमा सन्तुष्टिका लागि दुवै जना उत्सुक र सक्रिय हुन त आवश्यक छ नै सँगसँगै शारीरिक र भावनात्मक दुबै रुपले तयार हुनुपर्छ।
मान्छेको कामवासनाको स्तर फरक हुन्छ भने यौन सम्बन्धमा समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थात कुन समयमा तपाईं शारीरिक सम्बन्ध बनाउँदै हुनुहुन्छ रु त्यसले तपाईंको यौन सन्तुष्टिमा प्रभाव पार्छ।
४ बैशाख २०७९, आईतवार प्रकाशित